प्रमोदको “तिमी सपनाहरु नदेउ” (गीत)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
प्रमोदको “तिमी सपनाहरु नदेउ” (गीत)
फिल्मी फण्डा । लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको “तिमी सपनाहरु नदेउ” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । डा. दिप ओलीको शब्द रहेको उक्त गीतमा माया प्रेम र बिछोडको भाव समावेश गरिएको छ । हेम बस्नेतको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो देव राज आचार्यले छायाँकन गरेका हुन् ।
धेरै चर्चित गीतहरु गाइसकेका लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको उक्त गीत तिमी सपनाहरु नदेउमा माया धोका पाउँदाको पिडालाई समावेश गरिएको छ । दिनेश डाँगीको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई जीवन सेन्चुरीले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रान्जल र स्नेहाको “बिहानी” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक प्रान्जल पोखरेलको “बिहानी” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक प्रान्जल पोखरेलको नै शब्द रहेको उक्त गीतमा सागर अधिकारीको संगीत रहेको छ भने देवेन्द्र नेवाको एरेंज रहेको छ । गीतमा माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको छ ।
गायक प्रान्जल पोखरेल र स्नेहा भट्टराईको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो अर्जुन सापकोटाले छायांकन गरेका हुन् । बसन्त सापकोटाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई जीवन टण्डनले सम्पादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : राजेशको “दिक्तेल बजार २” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायक राजेश पायल राईको पुर्बेली लोक गीत “दिक्तेल बजार २” सार्वजनिक भएको छ । खोटाङ जिल्लाको पर्यटकिय एवम धार्मिक सम्पदाको वर्णन गरिएको उक्त गीतमा गाउँले लोक लयलाई समेटिएको छ ।
प्रेम प्रसाद भट्टराईको शब्द रहेको उक्त गीतमा संगीतकार डि आर अटुको संगीत रहेको छ भने राजु कार्किको एरेन्ज गीतमा रहेको छ । लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको गीतमा आफनी मायालुलाई जिवनभर आफनो माया रहिरने कुरा गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बिष्णुको “ए तिम्रो माया” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायिका बिष्णु माझी र गायक मोहन खड्काको “ए तिम्रो माया” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । विमल अधिकारको शब्द रहेको उक्त गीतमा गायक मोहन खड्काको सगीत रहेको छ भने विमल बाजुरालीको एरेंज रहेको छ । माय प्रेम र बिछोडको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा माया बिना बाँच्न नसकेको कुरा गरिएको छ । फरक शैलीमा रहेको उक्त गीत भावाना म्युजिक सोलुसनबाट बजारमा आएको छ ।
विमल अधिकारी , सारिका केसी , अभिनेता सुनिल थापा , रश्मि भट्ट , जमेष बिसी , बि.पाण्डे र रमेश अधिकारीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो उत्सव दाहालले छायांकन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा विमल अधिकारी रसारिका केसीलाई चोखो माया गर्ने प्रेमी प्रेमीकाको रुपमा देख्न् सकिन्छ भने उनीहरुको बिछोडको पिडालाई प्रस्तुत गरिएको छ । कपिल लामाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई बिकाश ज्ञवालीले सम्पादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बेनिशा र बलेको “आजकलका मुना मदन” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक नारायण थापाको “आजकलका मुना मदन” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । काली प्रसाद कार्कीको शब्द रहेको उक्त गीतमा शिखर सन्तोषको संगीत रहेको छ भने फडिण्द्र राईको एरेंज रहेको छ । गीतमा युवाहरु बिदेशीने कुरालाई समावेश गरिएको छ । नायिका बेनिशा हमाल , सागर लमसाल (बले),सुरविर पण्डित , लोमस पौडेल लोक मिश्रा लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको गीतको भिडियो उत्सव दहालले छायाँकन गरेका हुन् ।
गीतको भिडियोमा बेनिशा हमाल र सागर लमसाल बलेलाई प्रेमीको रुपमा देख्न सकिन्छ । युवराज वाइवाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई बिकास दहालले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : अर्जुनाको “मलामी” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायिका अर्जुना हिरासुङमा राईको “मलामी” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । आनन्द चाम्लिङ राईको शब्द रहेको उक्त गीतमा डक्टर किराँतको संगीत रहेको छ । आधुनिक गायनमा निकै राम्रो सम्भावना भएकी गायिका अर्जुना हिरासुङमा राईको उक्त गीतमा प्रेमी प्रमिका विचको मतभेदका कारण जिवनमा चोट भोग्नु पर्दाको पिडालाई समावेश गरिएको छ ।
समिर , पेशला , सस्पीन र सविनाको अभिनय रहेको गीतको भिडियो दिपक गिरीले छायाँकन गरेका हुन् । निशान एस केको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई प्रकाश एस केले सम्पादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बिश्वको “चट्ट खाइदिउ चटपटे” (गीत)
फिल्मी फण्डा । बिश्व शान्त राइको “चट्ट खाइदिउ चटपटे” बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ । ठाकुर राइको शब्द रहेको उक्त गीतमा बिश्व शान्त राइको नै संगीत रहेको छ भने देवेन्द्र नेवाको एरेंज रहेको छ । अम्मल राइ , बिश्व , राजा , बिसाखा , भि.एस .के र सुहानाको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो ओम प्रसाईंले छायाँकन गरेका हुन् । डान्सिङ्ग गीतको भिडियोमा दुवै मृगौला पिडित अम्मल राइको राम्रो नृत्य देख्न सकिन्छ ।
सरस्वती गुरुङको कोरियोग्राफीमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई ठाकुर राइले निर्देशन गरेका हुन् भने ओम प्रसाईंले सम्पादन गरेका हुन् । गीतको भिडियो ओएसआरको अफिसियल युट्युब च्यानल बाट सार्बजनिक भएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : मेलिनाको “यो आँखामा हेरन” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायिका मेलिना राई र गायक भुमिराज दरनालको “यो आँखामा हेरन” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । पुजा गुरुङको शब्द रहेको उक्त गीतमा महेश बिक्रम पाण्डेको संगीत तथा एरेंज रहेको छ । दुई माया गर्ने प्रेमीहरुको मनको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा मायालु बिना बाँच्न नसक्ने कुरा गरिएको छ ।
आर्यन भण्डारी र एलिना परियारको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो बिरेन्द्र भट्टले छायाँकन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा एक जोडीलाई माया गर्दै देख्न सकिन्छ । मदन खड्काको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई अनिल राणाले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : टिकाको “सिउदो सजाइ” (गीत)
फिल्मी फण्डा । टिका मगरको “सिउदो सजाइ” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । इराज मगरको शब्द रहेको उक्त गीतमा टिका मगरको नै संगीत रहेको छ । माया प्रेमको भाव समेटिएको उक्त गीतमा मायालुलाई भगाई लाने कुरा गरिएको छ । इराज , अन्जली र पेरिसको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो बिरेन्द्र भट्टले छायाँकन गरेका हुन् ।
गीतको भिडियोमा निकै राम्रो नृत्य देख्न सकिन्छ । रोहित बस्नेतको कोरियोग्राफीमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई रोसेल थापाले निर्देशन गरेका हुन् भने अनिल राणले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : रुपेश र सलिनाको “कान्छा कान्छी” (गीत)
फिल्मी फण्डा । रुपेश सिलवाल र सलिना घिसिङको “कान्छा कान्छी” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । शेखर आचार्यको शब्द रहेको उक्त गीतमा पवन खड्काको संगीत तथा एरेंज रहेको छ । गीतमा माया पिरतीको भाव समावेश गरिएको छ ।
शेखर , मनिषा , सावजल , रिजु , समर र कृष्टिनाको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो शैलेश श्रेष्ठ लुभुले छायाँकन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा निकै राम्रो नृत्य देख्न सकिन्छ । किस्न भुुसालको निर्देशनमा तयार भएको उक्त गीतको भिडियोलाई शैलेश श्रेष्ठले नै संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : एड्रिन र विल्सनको “जातले पाको” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायक एड्रिन प्रधानको “जातले पाको” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । जाको वाकोको शब्द रहेको उक्त गीतमा माया , प्रेम र बैशको कुरा गरिएको छ । फ्रेल्म रोज , विल्सन विक्रम राई (तक्जे बुढा) , सुशाङ लामा , डमबर गुरुङ र सुजिता शाहीको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो सन्जीप राईले छायाँकन गरेका हुन् ।
लोकप्रिय गायक एड्रिन प्रधानलाई फिर्चड गरिएको उक्त गीतको भिडियोमा साथी भाईको भेटघाट देखाइएको छ । विल्सन विक्रम राई तक्जे बुढाको नै निर्देशनमा नै तयार भएको गीतको भिडियोलाई मनोज कार्कीले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ऋचा र राजको “स्वदेश” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित लोकप्रिय गायक राजेश पायल राइको “स्वदेश” बोलको गीत सार्बजनिक गरिएको छ । श्री सिवाको शब्द रहेको उक्त गीतमा पुष्प गजमेरको संगीत रहेको छ भने फणिन्द्र राइको एरेंज रहेको छ । स्वदेश नै प्यारो भएको कुरा गरिएको उक्त गीतमा घर छोड्नु पर्दाको पिडालाई समावेश गरिएको छ । नायिका ऋचा शर्मा र राज खड्काको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो ज्ञानेन्द्र शर्मा हुमगाईले छायांकन गरेका हुन् ।
गीतको भिडियोमा एक आमा र छोराको कथा देखाइएको छ भने मातृभूमि छोड्नु पर्दाको दुख देखाइएको छ । गीतको भिडियोमा नायिका ऋचा शर्मालाई फरक अवतारमा देख्न सकिन्छ भने एक आमाको भुमिकामा देख्न सकिन्छ । राज खड्काको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई बिष्णु खड्काले सम्पादन गरेका हुन् ।